93 Wariye Oo Caalamka Lagu Dilay Sanadka 2016 – Goobjoog News
Warbixin uu soo saaray ururka caalamiga ah ee u dooda wariyeyaasha ayaa waxa uu sheegay in sanadka maanta ku eg dhammaaday ee 2016 caalamka siyaabo kala duwan loogu dilay 93 wariye kuwaas oo la dilay iyaga oo ku guda jira howlahoodo shaqo.
Tirada wariyeyaasha ah oo sandkaan la dilay way ka yar tahay marka loo fiiriyo sanadkii tagey 2015 ee la soo dhaafay.
Ururka waxa uu sheegay in wariyeyaasha lagu dilay dhacdooyin kala duwan iyagoo qaarkood weerar toos ah lagu qaaday kuwa kalana loo beegsaday siyaabooyin kala duwan.
Wadamada lagu dilay wariyeyaasha ayaa waxay kala yihiin:
Maraykanka waxaa lagu diley 24 wariye
Bariga dhexe waxaa lagu diley 28 wariye
Afrika waxaa lagu diley 8 wariye
Yurub waxaa lagu diley 3 wariye
Ciraaq waxaa lagu diley 15 wariye
Afgaanistaan waxaa lagu diley 13
Mexico waxaa lagu diley 11 saxafi.
Marka loo fiiriyo dilalka wariyeyaasha ee sanadkaan way ka tiro yar tahay marka loo eego sanadkii 2015 kaas oo la dilay in ka badan 122 saxafi.
Weeraradii ugu weynaa ee ay la kulmaan wariyeyaasha caalamka ayaa waxaa ka mid dhacdo ka dhacday wadanka Afghaanistaan taas oo ah in 7 saxfi la dilay hal mar kadib markii gaari ay saarnaayeen ay weerareen xubno ka tirsan ururka Daalibaan.